Askar Mareykan ah oo la shegay in ay joogaan Soomaaliya. Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Askar Mareykan ah oo la shegay in ay joogaan Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa la sheegay in ay soo gaareen magaalada Muqdisho kuwaasi oo ujeedkooda lagu sheegay gacan siinta dowladda.
Sida baahisay Warbaahinta dowladda Iran Waxaa soo baxaya Warar ku saabsan in 390 Askari oo Mareykan ah ay maanta kasoo dageen Garoonka Diyaaradah Magaalada Muqdisho kuwaas oo la sheegayo in ay Tababaro siinayaan Ciidamo ka tirsan Dowladda KMG ah.
Sidoo kale Warku waxa intaasi ku darayaa in Saaakiishaan ay howlo qarsoodi ah ka wadayaan gudaha Soomaalia oo ay Suaalo weydiiyaan markii lasoo qabto Xubnaha ka mid ah Al-Shabaab.
Sarkaal magaciisa lagu sheegay C/Wahaab Maxamed Cali oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay in arinkan ay Xaqiiqo tahay islamarkaana ay Ciidamadan Americanka ah ay Saldhigyo ka sameysan doonaan Magaalada Muqdisho.
Maraykanka ayaa horay u beeniyay War uu qoray Wariye ka tirsan wargeyska the Nation kaasi oo ahaa inuu Muqdisho Socdaal uu ku yimid uu kula kulmay Saraakiil Maraykan ah walina Mareykanka si toos ah uma sheegin in Ciidamo ay ka joogaan Soomaalia.